फार्मासिष्टहरूले जन्म नियन्त्रण तोक्न सक्छन्? - स्वास्थ्य शिक्षा | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार समुदाय, कम्पनी कल्याण औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण खेलहरु स्वास्थ्य शिक्षा औषधि जानकारी कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा चेकआउट
मुख्य >> स्वास्थ्य शिक्षा >> फार्मासिष्टहरूले जन्म नियन्त्रण तोक्न सक्छन्?
फार्मासिष्टहरूले जन्म नियन्त्रण तोक्न सक्छन्?
स्वास्थ्य शिक्षा फार्मासिष्ट राम्रो जान्छ
समुदाय फार्मासिस्टको भूमिका सधैं विकसित हुन्छ। फार्मासिष्टहरूले खोपहरू प्रबन्ध गर्न सक्छन् र वारफेरिन औषधिहरू, इन्सुलिन डोसेज स्केलहरू, र हृदय औषधिहरू अनुगमन गर्न र समायोजन गर्न फिजीशियन प्रोटोकल अन्तर्गत काम गर्न सक्दछन्। तर, फार्मासिष्टहरूले जन्म नियन्त्रण तोक्न सक्छन्? त्यहाँ अन्य धेरै महत्त्वपूर्ण तरिकाहरू छन् जुन फार्मासिष्टहरूले स्वास्थ्य सेवामा प्रमुख भूमिका लिन सक्दछन् - र महिलाको स्वास्थ्य ठूलो अवसर हो।
संयुक्त राज्यका धेरै महिला हार्मोनल गर्भ निरोधको पहुँच गर्न संघर्ष गरिरहेका छन् जुन ऐतिहासिक रूपमा चिकित्सक मार्फत सिफारिस गरिएको थियो। उनीहरूले कहाँ जान्न सक्छन् नियन्त्रण नियन्त्रण कहाँ जान्छन्, वा डाक्टरको भ्रमणको लागत वहन गर्न असमर्थ छन्। फार्मासिष्टहरू, तथापि, सामान्यतया धेरै पहुँचयोग्य हुन्छन्। हालका वर्षहरूमा, हर्मोनल गर्भनिरोधकहरूको लागि सिफारिसहरू प्रदान गर्न फार्मासिष्टको सम्भावित भूमिकाको मूल्या to्कन गर्न एउटा दवाव दिइयो।
महिलाको स्वास्थ्यमा फार्मासिष्टको भूमिका
TO २०० study को अध्ययन फेला पारे कि फार्मासिष्टहरू सुरक्षित रूपमा स्क्रिन गर्न र उचित रूपमा बिरामीहरूको लागि हार्मोनल गर्भनिरोधक विकल्पहरू सिफारिस गर्न सक्षम छन्। यसबाहेक, बिरामीहरू फार्मासिस्ट र प्रिस्क्रिप्शनमा सजीलो पहुँचको साथ धेरै सन्तुष्ट थिए, जबकि उनीहरूले आवश्यक उपचारको लागि हरेक तीन बर्षमा उनीहरूको मेडिकल डाक्टरसँग सम्पर्क राख्छन्।
यस आधारभूत अध्ययनको नतीजाले ओरेगन र क्यालिफोर्नियालाई फार्मासिष्टहरूलाई हर्मोनल गर्भनिरोधक सल्लाह दिन र अनुमति प्रदान गर्न कानून बनायो। आज ११ राज्य र कोलम्बिया जिल्लाले फार्मासिष्टहरूलाई स्व-प्रशासित हार्मोनल जन्म नियन्त्रण लेख्न र वितरण गर्न अनुमति दिन्छ। यी राज्यहरूमा क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, हवाई, मेरील्याण्ड, न्यू ह्याम्पशायर, न्यू मेक्सिको, ओरेगन, टेनेसी, यूटा, वाशिंगटन र पश्चिम भर्जिनिया शामिल छन्। अन्य धेरै राज्यहरू समान कानूनको मूल्या of्कनको विभिन्न चरणमा छन्।
यसको उत्तर प्रत्येक राज्यमा फरक हुन्छ। प्रत्येक राज्यले आफ्नो कानून पारित गर्‍यो, र यसले केही प्रकारका स्वयं प्रशासित हार्मोनल गर्भनिरोधकहरू समावेश गर्न सक्दछ, जस्तै मौखिक गर्भ निरोधक, ट्रान्सडर्मल प्याच, योनी औठी र इंजेक्शन योग्य हार्मोनल गर्भनिरोधकहरू। जहाँ सबै ११ राज्यहरूले मौखिक गर्भनिरोधक गोली र ट्रान्सडर्मल प्याच निर्धारित गर्न अनुमति दिन्छन्, केवल ओरेगन, क्यालिफोर्निया, र न्यू मेक्सिकोले विशेष गरी ईन्जेक्टेबल हार्मोनल गर्भनिरोधकलाई फार्मासिष्टले तोक्न अनुमति दिन्छ। यदि तपाईं यी राज्यहरूमा गर्भनिरोधकहरू खोजीरहनुभएको छ भने, त्यहाँ कुन खास विकल्पहरू उपलब्ध छन् भनेर पत्ता लगाउन फार्मासिष्टसँग कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ।
के म यी राज्यहरूमा कुनै पनि फार्मेसीमा गर्भनिरोधक लिन सक्दछु?
होईन, प्रत्येक फार्मासिष्ट वा फार्मेसीले यी सेवाहरू प्रदान गर्दैन। गर्भनिरोधक सल्लाह दिन चाहने फार्मासिष्टहरूले आफ्नो राज्यको लागि आवश्यक प्रशिक्षणमा भाग लिनु पर्छ।
यहाँसम्म कि यदि फार्मेसीमा स्टाफमा फार्मासिष्ट छ जुन प्रमाणित छ, यसको मतलब यो होइन कि तपाईं जहिले पनि फार्मेसीमा प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। वाशिंगटन, डी.सी. लाई आवश्यक छ कि घण्टा प्रमाणित फार्मासिष्ट उपलब्ध छ सूचीबद्ध गरिएको हुनुपर्छ। वाशिंगटन राज्यले फार्मेसीको बाहिरी भागमा एउटा प्रतीक वा स्टीकर राख्नु पर्छ भनेर संकेत गर्न यो फार्मेसीले स्व-प्रशासित हार्मोनल गर्भनिरोधकहरूलाई निर्धारित र वितरण गर्न सक्दछ।
कसरी बताउन यदि तपाइँको ल्याक्टोज असहिष्णु
यदि कुनै फार्मेसीले तपाईंलाई यी राज्यहरूमा गर्भनिरोधकहरूको पहुँच दिन सक्छ भने उत्तम तरिका भनेको ड्युटीमा फार्मासिष्टलाई सोध्नु हो। सबै राज्यको समान सहभागिता छैन। क्यालिफोर्नियामा, केवल यो अनुमान गरिएको छ ११% फार्मेसीहरू यो सेवा प्रस्ताव गर्दै छन्। यसको विपरितमा, एक अध्ययन ओरेगोनमा फेला पर्‍यो कि यसको population 75% जनसंख्या उही जिप कोडमा यस सेवा प्रस्ताव गरिरहेका फार्मेसीको रूपमा बस्दछन्, र फार्मासिष्टहरू ओरेगनमा गर्भनिरोधकहरूका लागि कुल औषधिहरूको १०% भन्दा बढी लेख्न जिम्मेवार थिए।
फार्मासिष्टको साथमा कस्तो यात्रा आउँदछ? यसको सट्टामा मैले मेरो डाक्टरलाई भेट्नु पर्छ?
तपाईंको फार्मेसी भ्रमणमा, फार्मासिष्टले तपाईंलाई एक आत्म-निर्देशित प्रश्नावली भर्नुहुनेछ, जसले तपाईंको चिकित्सा र परिवारको इतिहासको साथै तपाईंको गर्भनिरोधक प्रयोगको इतिहासमा जानकारी संकलन गर्दछ। फार्मासिष्टले तपाईंको रक्तचाप पनि लिनेछ। राज्यमा निर्भर गर्दै, १ 140०/90 ० भन्दा माथि रक्तचाप पढ्ने बिरामीहरूले प्राथमिक हेरचाहमा वा महिलाको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकमा जान सक्दछन्। धूम्रपानको ईतिहासको साथ certain 35 बर्ष भन्दा माथिका वा केही क्यान्सरको इतिहास भएका बिरामीहरूका लागि पनि यो सत्य हो।
केहि राज्यहरुलाई प्रमाण चाहिन्छ कि तपाईले आफ्नो प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदायक देख्नु भएको छ निश्चित अवधिमा अन्य रोकथाम स्वास्थ्य स्क्रिनिंगको लागि, जस्तै एक प्याप स्मीयर, स्वास्थ्य ईतिहासको पर्वा बिना। कोलोराडोमा, फार्मासिष्टहरू तपाईंलाई तीन वर्ष भित्र राम्रो महिला भ्रमण गरिसकेका छन् भनेर निश्चित गर्न आवश्यक छ। नयाँ मेक्सिकोमा, यो गत बर्षमा आवश्यक छ।
धेरै राज्यहरूमा, फार्मासिष्टहरूले तपाईंलाई तपाईंको भ्रमणको लिखित सारांश दिन आवश्यक गर्दछ, र तपाईंको प्राथमिक प्रदायकलाई उचित समय भित्रमा सूचित गर्न आवश्यक छ। धेरै जसो केसहरूमा तपाई फार्मासिष्टको साथ तपाईको यात्रा पूरा गरे पछि तपाईको प्रिस्क्रिप्शन तुरन्तै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
FAQ: फार्मेसीमा जन्म नियन्त्रण प्राप्त गर्दै
गर्भ निरोधात्मक औषधीको लागि फार्मासिष्ट हेर्न म कति बर्ष हुनु पर्छ?
प्रत्येक राज्यमा प्रोटोकल फरक हुन्छ, तर धेरैले तपाईको उमेर १ 18 बर्ष हुन्छ। ओरेगनले फार्मासिष्टलाई १ 18 बर्ष भन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई सल्लाह दिन अनुमति दिनेछ यदि उनीसँग उनको प्राथमिक हेरचाह प्रदायक द्वारा जारी गरिएको अघिल्लो प्रिस्क्रिप्शन थियो। टेनेसीले १aबर्ष भन्दा कम उमेर मुक्ति पाएको बिरामीलाई पर्चाको लागि फार्मासिष्ट हेर्नका लागि अनुमति दिनेछ।
के दुखाई राहत सुरक्षित छ जब गर्भवती छ
प्रिस्क्रिप्शनको लागि फार्मासिष्ट हेर्न कुनै शुल्क छ? के मेरो बीमाले यसलाई कभर गर्दछ?
धेरै फार्मेसीहरूले फ्ल्याट शुल्क लिन्छन्, प्राय: $ 30- $ 50 को दायरामा, फार्मासिष्टलाई हेर्न र प्रिस्क्रिप्सनको लागि मूल्यांकन गर्न। केही फार्मेसीहरू मेडिकल बीमा र / वा मेडिकेड यात्राको लागि बिलिaid गर्न सफल भएका छन्। तपाईको भ्रमण अघि फार्मासिष्टसँग लागतको बारेमा कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ।
सम्बन्धित: कसरी नि: शुल्क प्राप्त गर्न (बीमा बिना पनि जन्म नियन्त्रण )
के वास्तविक पर्चेको लागत भ्रमण शुल्कमा कभर गरिएको छ?
कुन प्रिन्टसेप्ट छनौट गर्नुहुन्छ र तपाईको बीमा कभरेजमा निर्भर गर्दै प्रिस्क्रिप्शनले थप शुल्क लिन सक्छ। बीमा योजनाहरु केहि तपाइँको लागी शुल्क मा केहि गर्भनिरोधक विकल्पहरु प्रदान गर्न को लागी आवश्यक छ, तर सबै समावेश हुन सक्दैन। यदि तपाईं बीमाकृत छैन वा तपाईंको छनौट विधि कभर गरिएको छैन भने जाँच गर्नुहोस् एकलकेयर तपाईंको प्रिस्क्रिप्शनमा सम्भावित लागत बचतको लागि।
मेरो प्रिस्क्रिप्शनमा पुन: भरपाई हुनेछ?
जबकि समय अवधि राज्य मा फरक फरक हुन सक्छ, फार्मासिष्टहरु को पर्चेमा रिफिल प्रस्ताव गर्न को लागी अनुमति छ। प्रिस्क्रिप्शनहरू उही राज्यमा अन्यले समान समयावधि सीमाको अधीनमा हुनेछन्। एक पटक प्रिस्क्रिप्शनको समयावधि सकिएपछि, तपाईले या त औषधि जारी राख्न फेरि फार्मासिष्ट वा तपाईंको मेडिकल प्रदायकलाई भेट्नुपर्नेछ।
म बस्ने राज्यमा मसँग कस्तो प्रकारको पहुँच छ भनेर पत्ता लगाउने उत्तम तरिका के हो?
तपाईको स्थानीय फार्मेसी सूचना को सब भन्दा सजिलो र सुलभ स्रोत हो। तपाईंको राज्यमा फार्मेसीको राज्य बोर्डले उनीहरूको वेबसाइटमा केही जानकारी प्रदान गर्न सक्दछ। धेरै राज्यहरू अझै कानूनमा काम गरिरहेका छन जसले फार्मासिष्टहरूलाई सल्लाह दिन अनुमति दिन्छ, र यो सम्भव छ कि तपाई यस प्रक्रियामा सक्रिय हुन सक्नुहुन्छ यसलाई राज्यमा ल्याउनका लागि।
एन्टिबायोटिकबाट खमीर संक्रमणलाई रोक्दै
के स्याउ साइडर सिरका को बारे मा राम्रो छ
कसरी तुरुन्तै uti दुखाइ बाट छुटकारा पाउन
तपाइँ राती खोकी कसरी रोक्नुहुन्छ?
दुखाई मांसपेशिहरु को लागी काउन्टर औषधि मा
प्रचलित को लागी सामान्य नाम के हो
तपाइँ एक पटक मा कती एडविल लिन सक्नुहुन्छ